Yesu Kɔɔ Galilea Mpoano | Yesu Asetena
YESU YII NE HO ADI WƆ GALILEA MPOANO
PETRO NE ASOMAFO A AKA NO BƐMA NNWAN NO ADUANE
Anadwo a Yesu rebɛwu a ɔne asomafo no hyiae no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Sɛ wɔnyane me firi awufoɔ mu a, mɛdi mo anim kan akɔ Galilea.” (Mateo 26:32; 28:7, 10) Nea ɔkae yi nti, n’asuafo no bebree kɔɔ Galilea, nanso dɛn na na wɔrekɔyɛ?
Emu hɔ baabi na Petro ka kyerɛɛ asomafo nsia sɛ: “Merekɔyi nam.” Wɔn nyinaa kaa sɛ: “Yɛne wo bɛkɔ.” (Yohane 21:3) Wɔkɔhyɛɛ mu anadwo mũ no nyinaa nso wɔannya hwee. Anim reyɛ atete no, Yesu bɛgyinaa po no ano, nanso wɔanhu nipa ko. Yesu bisaa wɔn sɛ: “Mma nkumaa, monnyaa deɛ mobɛdie, meboa?” Wɔyii ano sɛ: “Dabi!” Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mongu asau no wɔ kodoɔ no nifa na mobɛnya bi.” (Yohane 21:5, 6) Wɔguu asau no, wɔnyaa mpataa bebree; na wɔntumi ntwe asau no mpo.
Yohane ka kyerɛɛ Petro sɛ: “Ɛyɛ Awurade!” (Yohane 21:7) Ɛhɔ ara na Petro faa n’atade nguguso hyɛe; ɔreyi nam nti na ɔyi guu hɔ. Ɔtoo ne ho too nsuo no mu dwaree bɛyɛ mita 90 kɔɔ mpoano. Wɔn a wɔkaa korow no mu no yɛɛ nkakrankakra twee asau a nnam ayɛ mu ma no baa po no ano.
Wɔbɛduu mpoano no, wɔhuu “gyabidie a wɔasɔ a ɛnam gu soɔ ne paanoo.” Yesu kaa sɛ: “Momfa mpataa a moyii no seesei yi ara no bi mmra.” Petro twee asau a emu mpataa yɛ 153 no bae. Afei Yesu kaa sɛ: “Mommra mmɛdidi.” Nanso wɔn mu biara annya akokoduru ammisa no sɛ: “Woyɛ hwan?” ɛfiri sɛ na wɔnim sɛ ɛyɛ Yesu. (Yohane 21:9-12) Mprɛnsa ni a Yesu ayi ne ho adi akyerɛ asuafo pii abom.
Yesu maa wɔn nyinaa paanoo ne mpataa dii. Afei ebia ɔhwɛɛ mpataa a wɔanya no, na ɔbisaa sɛ: “Simon, Yohane ba, wodɔ me sene yeinom anaa?” Ná ɔpɛ sɛ ɔhu sɛ Petro pɛ mpataayi adwuma no sen adwuma a Yesu de ahyɛ ne nsa no anaa. Petro buaa sɛ: “Aane, Awurade, wonim sɛ mepɛ w’asɛm.” Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Ma me nnwammaa aduane.”​—Yohane 21:15.
Yesu san bisaa no sɛ: “Simon, Yohane ba, wodɔ me?” Ɛbɛyɛ sɛ asɛm no yɛɛ Petro ahometew, enti ɔkaa sɛ: “Aane, Awurade, wonim sɛ mepɛ w’asɛm.” Yesu san ka kyerɛɛ no sɛ: “Yɛn me nnwan nkumaa.”​—Yohane 21:16.
Yesu bisaa no ne mprɛnsa so sɛ: “Simon, Yohane ba, wopɛ m’asɛm anaa?” Afei deɛ ɛbɛyɛ sɛ na Petro suro sɛ ebia Yesu nnye no nni bio. Petro ka sii so sɛ: “Awurade wonim nneɛma nyinaa; wonim sɛ mepɛ w’asɛm.” Yesu san kyerɛɛ Petro nea ɔnyɛ. Ɔkaa sɛ: “Ma me nnwan nkumaa aduane.” (Yohane 21:17) Asɛm yi ma yɛhu sɛ wɔn a wɔayi wɔn sɛ wɔnhwɛ Onyankopɔn nnwan no, ɛsɛ sɛ wɔsom nnwan no.
Onyankopɔn adwuma a Yesu bɛyɛe nti, wɔguu no mpokyerɛ kɔkuu no. Ɔmaa Petro huu sɛ biribi saa na ɛbɛto no. Yesu kaa sɛ: “Woyɛ aberanteɛ no, na wode adeɛ bɔ wo mu nante kɔ baabi a wopɛ. Nanso sɛ wobɔ akora a, wobɛtene wo nsa na obi de adeɛ abɔ wo mu, na ɔde wo akɔ baabi a wompɛ.” Afei Yesu ka kaa ho sɛ: “Kɔ so di m’akyi.”​—Yohane 21:18, 19.
Petro huu ɔsomafo Yohane, na ɔbisaa Yesu sɛ: “Awurade, oyi nso bɛyɛ dɛn?” Ná Yesu pɛ Yohane asɛm paa, na na Petro pɛ sɛ ɔhu nea ɛbɛto ɔno nso. Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Sɛ mepɛ sɛ ɔtena hɔ kɔsi sɛ mɛba a, ɛfa wo ho bɛn?” (Yohane 21:21-23) Petro deɛ, nea na ɛhia sɛ ɔyɛ ara ne sɛ ɔbɛdi Yesu akyi; nea ɛbɛto nkurɔfo deɛ, na ɛnsɛ sɛ ɔde haw ne ho. Nanso nea Yesu kae no, na ɔrekyerɛ sɛ Yohane bɛtena ase akyɛ asen asomafo a aka no, na sɛnea Yesu ba n’Ahenni mu a ɛbɛyɛ no, na Yohane bɛnya ho anisoadehu.
Yesu yɛɛ nneɛma foforo pii a, ɛno deɛ wɔankyerɛw. Sɛ wɔkaa sɛ wɔrekyerɛw a, anka ɛrenkɔ nwoma biara mu.
Dɛn na ɛma yɛhu sɛ na asomafo no nhu nea wɔnyɛ wɔ Galilea?
Bere a Yesu gyina Galilea Po ano no, ɛyɛɛ dɛn na asomafo no huu sɛ ɛyɛ Yesu?
Wɔn a wɔayi wɔn sɛ wɔnhwɛ Onyankopɔn nnwan no, dɛn na Yesu kyerɛɛ sɛ wɔnyɛ?
Asɛm bɛn na Yesu ka de kyerɛɛ ɛkwan a Petro bɛfa so awu?